မှကြွလာသောအခါညမ်းသေား၊လူကြိုက်အများဆုံး niches အခံု။ လူတိုင်းဒိုမီနိုဖြစ်နှင့်ကျွန်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏နည်းလမ်းများရှိသည်ဖို့လိုသည်။ ကောင်းပြီ၊သင်တို့ထဲမှအချို့သည်စက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းသောအမျိုးအစားဖြစ်မည်၊စိတ်မပူပါနှင့်၊ငါတို့သည်လည်းသင့်အတွက်ဂိမ်းများရှိသည်။ ဒီစုဆောင်းမှုဂိမ်းများတွင်ပျော်မွေ့နိုင်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲတွေအများကြီးနှင့်အတူလာမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းသူတို့ပိုကောင်းသင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်ကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သင်ကျေးကျွန်စိတ်ကြိုက်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နေကြသည်။, ထိုအခါငါတို့သည်သင်တို့ညစ်ညမ်းလောကီသားတို့သည်ယခုအချိန်တွင်၏အကောင်းဆုံးဂရပ်ဖစ်ရလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်,ဂိမ်းကျော်အများဆုံးထိန်းချုပ်မှု,နှင့်လည်းသင့်ရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးအစည်းအဝေးများအတွက်အသုံးပြုစေခြင်းငှါရှိသမျှသောကိရိယာများနှင့်အတူစုစုပေါင်းလက်ဝါးကပ်တိုင်ပလက်ဖောင်းလိုက်ဖက်တဲ့. ကျနော်တို့တောင်မှထိတွေ့မျက်နှာပြင်ဂိမ်းကိုသင်ကီးဘုတ်နဲ့မောက်စ်နှင့်အတူကွန်ပျူတာပေါ်မှာပျော်မွေ့ရဂိမ်းကစားကဲ့သို့တူညီသောကြောင်းသေချာစေရန်ဂိမ်းများကိုစမ်းသပ်ပြီး။
ဆိုက်ကိုကိုယ်တိုင်ကကောင်းစွာစနစ်တကျနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အခြားအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဘို့လိုအပ်သမျှအင်္ဂါရပ်ရှိသည်။ မှန်ပါတယ်,ဒီသင်မှတ်ချက်အပိုင်းများနှင့်ဖိုရမ်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖျော်ဖြေဖို့အဆင်သင့်ကစားသမားတစ်ဦးတက်ကြွစွာအသိုင်းအဝိုင်းရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာတစ်ဦးညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုက်ပေါ်ရှိဤအတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံးကိုအခမဲ့ခံစားနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ဆိုဒ်တွင်နဖူးစည်းစာတမ်းများတပ်ဆင်ထားသော်လည်းသင်၏အတွေ့အကြုံကိုရှုပ်ထွေးစေရန်ပေါ့ပ်များနှင့်အခြားအနှောင့်အယှက်ပေးသည့်ကြော်ငြာကိရိယာများကိုသင်ဘယ်တော့မှတွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျနော်တို့သင်လိုအပ်သမျှရှိသည်နှင့်သင်ကအားလုံးကိုရလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့လိင်ဂိမ်းကစားခြင်း၏ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးအချုပ်အနှောင်ညစ်ညမ်းပလက်ဖောင်းများ၏တဦးတည်းဖန်တီးချင်နှင့်ကျွန်တော်ကောင်းစွာပြုလုပ်နေကြ. ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ဆိုတာလူတိုင္းအတြက္တူညီတာမဟုတ္ဘူးဆိုတာကၽြန္ေတာ္တို႔ သိပါတယ္။ ဤစာကြည့်တိုက်သည်အစွန်းရောက်များနှင့်အရှက်တကွဲဖြစ်စေသောပိုမိုအမျိုးသမီးဖော်ရွေသောဂိမ်းနှစ်ခုလုံးပါ ၀ င်သည်။ အဆိုပါအမျိုးသမီးဖော်ရွေဂိမ်းမီးခိုးရောင်၏50 အရိပ်အားဖြင့်ရာထူးတိုးနှောင်ကြိုး၏ကြင်နာဆင်တူမယ့်အချို့အကြောင်းအရာနှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်။ ကျေးကျွန်များသည်၎င်းတို့လိုက်လျှောက်သည့်အခါကောင်းမွန်စွာခံစားနေကြရသည့်အချုပ်အနှောင်မျိုးဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်,ကျနော်တို့အစွန်းရောက်ပစ္စည်းပစ္စယသို့နေသောသူအပေါင်းတို့သည်ညစ်ပတ်ညစ်ညမ်းပရိတ်သတ်များအတွက်အနှောင်အဖွဲ့နှင့်အတူလာကြ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်၏ဤအစွန်းရောက်သောဘေ့စ်ဂိမ်းများသည်အရူးအကျိုးသက်ရောက်မှုကစားခြင်း၊ကုန်ကြမ်းမြည်းခြင်း၊ကြီးမားသောအရာဝတ္ထုများကိုတွန်းလှန်ခြင်းနှင့်ပင်အချို့သောတွန်းလှန်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များပါ ၀ င်သည်။ ဒီဂိမ်းထဲမှာကျွန်ဒါအသံကျယ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အော်သံသင်သည်ထိုသူတို့အဘို့စိတ်မကောင်းခံစားစတင်ပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်လက်တွေ့ကျကျဖြစ်ကြသည်။ သင်ဤဂိမ်းများတွင်မာစတာသို့မဟုတ်ဒိုမီနိုနှစ်ခုလုံးအဖြစ်ကစားနိုင်သည်။
ဒါကြောင့်အချုပ်အနှောင်နှင့်စည်းကမ်းမှကြွလာသောအခါသင်တို့ရှိသမျှကိုသင်၏တိုက်တွန်းနှင့်စိတ်ကျေနပ်အောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သငျသညျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နာကျင်မှုတံခါးခုံ၏သက်ရောက်မှုများ၏အစစ်အမှန်အသက်တာ၌ဖြစ်နိုင်သမျှဘယ်တော့မှလိမ့်မည်သည့်အချို့သောအစွန်းရောက်အရှည်ကိုသွားနိုင်ပါတယ်။ သင့္ရဲ႕ စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြ၊အေတြ႕အႀကံဳေတြကိုအျခားသူေတြနဲ႔ မွ်ေဝခ်င္တယ္ဆိုရင္သင့္ရဲ႕ ဆိုက္မွာဒါေတြလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကျနော်တို့မှတ်ချက်အပိုင်းများနှင့်ဘင်္ဂါလီနိူးယုတ်အပြန်အလှန်များအတွက်စုဆောင်းနေကြသည်ရှိရာဖိုရမ်နှစ်ခုလုံးနှင့်အတူလာကြ၏။, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ပေါ်မှာဆိုရင်ပြီးတာနဲ့သင်သည်ဧကန်အမှန်ဖြန့်ချိနေကြသည်အတိုင်းစုဆောင်းမှုအသစ်ဂိမ်းများကိုထည့်သွင်းစောင့်ရှောက်ကတည်းကနောက်တဖန်ဘီအမ်အိပ်ဂိမ်း၏အခြားအရင်းအမြစ်လိုအပ်သွားဘယ်တော့မှလိမ့်မည်။ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောနည်းလမ်းဖြင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုခံစားခြင်းသည်ပို၍ကျေနပ်စရာကောင်းသောကြောင့်သင်ပင်လျော့နည်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များကိုကြည့်လိမ့်မည်။